Kate Middleton kwuru banyere mmekọrịta ya na Elizabeth II na enyemaka ya ná mmalite nke ndụ ezinụlọ
Onye ọ bụla amarala n'eziokwu ahụ bụ na nyocha nke ndị eze Britain gosipụtara na ndị na-ebi akwụkwọ na-enwe mmasị na-aga n'ihu. N'eziokwu, ha niile na-arụ ọrụ ma ọ bụ nsogbu ndị mmadụ nwere. Ụnyaahụ, Fans nke ezinụlọ eze ukwu nke Britain nọ na-echere anya ịtụnanya: Kate Middleton, nwunye Prince William, gbara mkparịta ụka dị mkpirikpi nke ọ gwara otú Queen Elizabeth II si eme omume kwa ụbọchị.
Nwanyị Queen nwere nnọọ obi ụtọ banyere ọmụmụ Charlotte
Kate malitere nyocha ya na ihe o kwuru gbasara ọmụmụ Charlotte. Dị ka ọ dị, Elizabet Elizabeth nwere nnọọ obi ụtọ mgbe nwa agbọghọ pụtara. Nke a bụ ihe Middleton kwuru banyere nke a:
"Mgbe ha gwara m na ultrasound na anyị ga-enwe nwa nwanyị na William, ọ bụghị naanị anyị, mana ndị ikwu anyị nwere obi ụtọ. Otutu ozi ndi a bu ihe ndi eze ya huru n'anya, n'ihi na o kwuru na o choro inwe nwa obere n'ulo anyi. Ọ hụrụ Charlotte ọchị ma na-enwe mmasị mgbe niile na obi ya na otú o si etolite. Enweghị m ike ịsị na eze ahụ adịghị amasị George ma ọ bụ ụmụ ụmụ ụmụ ya ndị ọzọ, mana o nwere àgwà pụrụ iche, nke dị ọkụ ma na-agbagha nwa anyị nwanyị. Mgbe Elizabeth II bịara ileta anyị, ọ na-agbalị mgbe niile ịkọ ahụmahụ ya n'ịzụ ụmụ. Na mgbakwunye, obere akpa ya nwere onyinye maka nwa ya na nwa ya nwoke, nke ọ na-ahapụ n'ime ụlọ ha ruo mgbe ha hụrụ. Ọ na-emetụ n'ahụ, okwu ahụ enweghị ike ịpụta. Echere m na omume dị otú ahụ nke Elizabeth II bụ ihe ọzọ karịa ịhụnanya ya enweghị njedebe maka George na Charlotte. "
Kate Middleton na Queen Elizabeth II
Princess Charlotte nke Cambridge
Queen nyere Kate aka iru ala mgbe agbamakwụkwọ ahụ gasịrị.
Mgbe Middleton lụrụ Prince William, ọtụtụ agbanweela ná ndụ ya. Karịsịa, Kate tụrụ egwu ọrụ ọ na - arụ ugbu a n'ọkwá Duchess nke Cambridge. Iji nwee ike ịbanye na ya, Middleton nwetakwara nkuzi ezi omume, ma Elizabeth II nwere nkwado na enyemaka kasịnụ. Lee okwu ndị a na-echeta oge ndụ ya Kate:
"Nye m, ọ bụ oge siri ike, mana eze na-abịa mgbe niile. O ji nwayọọ gwa m ebe m na-emehie ihe nakwa ihe a ga-eme iji zere ha n'ihu. Ya mere, njem mbụ nke m nwere. Agaghị m echezọ ya. Ọ bụ njem na Leicester. N'ụbọchị ahụ, enwere m nchegbu, n'ihi na tupu nke ahụ, m na-apụta n'ihu ọha na William. M na-akwadebe maka njem a ruo ogologo oge, na eze nwanyị bụ nanị onye ghọtara ihe ọ pụtara ibute na ihe omume ọha na eze nanị. N'ụbọchị ahụ, Elizabeth II nwere mmasị na nleta Leicester karịa mgbe ọ dị na mbụ. O jiri oge dị ukwuu mee m. Ọ bụ ezigbo nlekọta na nkwado n'aka Queen. "
Prince George na William, Kate Middleton, Queen Elizabeth II
Queen Elizabeth II na Kate Middleton
Monica Lewinsky kwupụtara echiche ya banyere nsogbu ahụ ma cheta ihe ọjọọ ahụ na Bill Clinton
Michael Douglas kwụsịrị ebubo nile nke iyi egwu mmekọahụ
Monica Bellucci na-agbaji echiche nile nke ọgbọ na ntancha foto nke na-egbuke egbuke
Onye na-eme ihe nkiri Tom Hardy gbara ajụjụ ọnụ maka mbipụta January nke Esquire
Nwa agbọghọ Ben Affleck Lindsay Shukus kwuru maka oge mbụ ha na mmekọrịta ha
Christina Aguilera jụrụ iso na Voice
Onye mmeri nke Eurovision, nwa agbọghọ ajị agba, Conchita Wurst, kwesịrị ... ịnwụ anwụ?
Renee Zellweger nyere mkparịta ụka dị mma na magazin Hollywood Reporter ma kwadoo oge ịse foto mara mma
Helen Mirren na Liam Neeson kwupụtara eziokwu na ịhụnanya maka ibe ha
Emily Ratjakovski: "Enwere m ọrụ dị egwu na-ahụ n'ahụ m"
Foto dị iche iche nke ndị bi na Siberia
Kedu otu esi emeso ụkwara siri ike na onye toworo eto, dabere na ihe kpatara ya?
Mambrezia - kụrụ na ilekọta
Nnukwu nke agarics na-agwọ ọrịa
Kedu ka esi kpoo mgbidi na mgbidi?
Ogwe osisi maka kichin
Agbamakwụkwọ di na nwunye
Jam si nwa chokeberry - ezi na ihe ojo
Ebe a na-edozi akwa maka nwa
Ogige na-acha uhie uhie
Kedu ka esi agwa di m banyere afọ ime?
Gịnị mere nkwonkwo ji achọ?
Ala n'elu mbara ihu
Eghe eghe na eyịm
Kedu trimmer dị mma - eletrik ma ọ bụ peturuolu?
Hermaphrodite - akụkọ ifo nke Ancient Greece
Gerard Butler nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ihe mberede